आफै अस्पताल पुगेकी महिलाको रिपोर्ट देखेर डाक्टरसमेत चकित – Dainik Sangalo
आफै अस्पताल पुगेकी महिलाको रिपोर्ट देखेर डाक्टरसमेत चकित
August 6, 2020 3345
एक महिला ३२ वर्षदेखि सामान्य जीवन बाँचिरहेकी थिइन् । उनको विवाह भएको ९ वर्ष बितिसकेको थियो र वैवाहिक जीवन पनि राम्रो चलिरहेको थियो तर अचानक उनलाई थाहा भयो कि उनी एक पुरुष हुन् र उनलाई टेस्टिक्यूलर क्यान्सर छ । भारतको पश्चिम बंगालमा बीरभूममा बस्ने यी महिला शारीरिक रुपमा त महिला हुन् तर आनुवंशिक रुपमा उनी पुरुषको रुपमा जन्मिएकी थिइन् ।जब उनको स्थिती अस्पताल पुग्यो तब डाक्टर पनि चकित परे र उनीहरुले यो समस्याबारे थाहा पाउनका लागि एउटा लामो प्रक्रियाबाट गुज्रनु पर्यो । त्यसपछि थाहा भयो कि यी महिलालाई एन्ड्रोजन इन्सेन्सिटिभिटी सिन्ड्रोम छ जसमा व्यक्तिको शरीर महिलाको हुन्छ तर क्रोमोसोम पुरुषको हुन्छ ।
यी महिला केहि महिना अघि पेट दुख्ने समस्या लिएर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस क्यान्सर अस्पताल गएकी थिइन् । उनको उपचार गर्ने डाक्टरले उनलाई कस्तो रोग लागेको छ भनेर बुझ्न सकेनन् ।क्यान्सर अस्पतालमा कन्सल्टेन्ट क्लिनिकल अन्कोलोजिस्ट डाक्टर अनुपम दत्ता र कन्सल्टेन्ट सर्जिकल अन्कोलोजिस्ट डाक्छर सौमेन दासले उनको उपचार गरिरहेका थिए ।
डाक्टर अनुपम दत्ता भन्छिन्, ‘महिला अत्यधिक पेट दुख्ने समस्या लिएर अस्पताल आएकी थिइन् । जब उनको परीक्षण गरियो तब उनको पाठेघर (गर्भाशय) र ओभरी नभएको थाहा भयो र पेटमा एउटा ट्युमरजस्तो देखियो । जब हामीले उनको बायोप्सी निकाल्यौं तब थाहा भयो कि उनलाई सेनिनोमा छ जुन पुरुषमा हुने टेस्टिक्यूलर क्यान्सर हो ।’
टेस्टिक्यूलर क्यान्सर अण्डकोषमा हुन्छ जुन पुरुषको मुख्य प्रजनन अङ्ग हो । तर यी महिलाको पेटमा नै यो अङ्ग पाइयो जसले अब ट्युमरको रुप लिइसकेको थयिो । यस्तो किन भयो, यसबारे पत्ता लगाउनका लागि महिलाको जीनको परीक्षण गरियो । डा. अनुपम भन्छन्, ‘हामीले उनको जीन परीक्षण गर्यौं जसमा क्रोमोसोमको विश्लेषण गरियो । यसमा पत्ता लाग्यो कि त्यसमा ४६ एक्सवाई क्रोमोसोम छ जुन पुरुषमा हुन्छ । महिलामा ४६ एक्सएक्स क्रोमोसोम र पुरुषमा एक्सवाई क्रोमोसोम पाइन्छ ।’
‘यसमार्फत् हामीलाई थाहा भयो कि महिला एक दुर्लभ रोग एन्ड्रोसन इन्सेन्सिटिभिटी सिन्ड्रोमबाट ग्रस्त छिन् । यद्यपि, उनी सामान्य जीवन बाँचिरहेकी छिन् र यो सिन्ड्रोमका कारण उनको वैवाहिक जीवनमा पनि कुनै असर परेको छैन ।’ डाक्टर अनुपमका अनुसार यो रोग लाग्दा अन्य कुनै समस्या हुँदैन । तर महिला कहिले आमा भने बन्न सक्दिनन् । उनको शरीरमा पाठेघर नै हुँदैन । यसै कारण यी महिला कहिले पनि महिनावारी भइनन् । महिलाले महिनावारी नभएकोमा उपचार पनि गराएकी थिइन् तर डाक्टरले पाठेघर नभएको कारण पत्ता लगाउन कोसिस गरेनन् । कोही महिलामा जन्मजात नै यो अङ्ग नहुने भएकोले पनि यसको कारण नखोजिएको हुनसक्छ ।
ती महिलालाई मात्रै होइन, उनकी एक काकी र २८ वर्षकी बहिनीमा पनि यहि सिन्ड्रोम देखिएको छ । डाक्टर अनुपम भन्छन्, ‘जब हामीलाई यो सिन्ड्रोमबारे थाहा भयो तब हामीले उनको परिवारबारे पनि सोध्यौं । उनले उनका परिवारका अन्य दुई महिला पनि महिनावारी नभएको बताइन् । उनीहरुको पनि परीक्षण गर्दा यहि सिन्ड्रोम पाइयो तर उनीहरु पनि सामान्य जीवन बाँचिरहेका छन् । अब हामी उनीहरुको पेटमा पनि अण्डकोष छ छैन भनेर पत्ता लगाउने कोसिस गर्छौं । यदि यस्तो भए, त्यो हामी निकालिदिनेछौं ता कि भविष्यमा क्यान्सरको खतरा नहोस् ।’
अहिले महिलाको शल्यक्रिया गरेर चारदेखि पाँच किलोको ट्युमर निकालिएको छ । पूर्ण उपचारका लागि उनको किमोथेरापी चलिरहेको छ र महिलाको हालत स्थिर छ । महिलामा पुरुषको क्रोमोसोम छ तर उनी पूर्ण रुपमा एक महिला हुन् । यो कुरा सम्झाउन र स्विकार गर्नका लागि उनको काउन्सिलिङ पनि गरिँदैछ । डाक्टरका अनुसार उनको जीवनमा कुनै परिवर्तन आएको छैन, सबै पहिले जस्तै छ । उनको परिवारले पनि यो कुरा बुझ्दै छ ।
यो एक जेनेटिक डिसअर्डर हो जसले बच्चाको यौ’नाङ्ग र प्रजनन अङ्गलाई प्रभावित पार्छ । यसमा यौ’नाङ्ग अविकसित हुनसक्छ र प्रजनन अङ्ग शरीरमा हुँदै हुँदैनन् । डाक्छर अनुपम दत्ताका अनुसार जेनेटिक डिसअर्डरमा बिरामीको कुनै गल्ती नै हुँदैन । यो रोग लागेकाहरुको शरीरबाट निस्कने टेस्टोस्टेरोन हर्मोनलाई शरीरले स्विकार नै गर्दैन जसका कारण उनको शरीरमा यसले केहि असर गर्दैन । त्यो टेस्टोस्टेरोन पछि एस्ट्रोजनमा परिवर्तन हुन्छ जुन महिलाको हर्मोन हो । जसकारण बच्चा महिलाको रुपमा नै बढ्दै जान्छ । यो एक दुर्लभ रोग हो र करिब २२ वा २५ हजार बच्चामा यस्तो रोग देखिन सक्छ । साथै यो सिन्ड्रोमबाट ग्रस्त सबै महिलालाई टेस्टिकल क्यान्सर हुन्छ भन्ने नै छैन । यद्यपि, पहिले नै सिन्ड्रोम बारे थाहा भए क्यान्सरको खतराबाट भने बचाउन सकिन्छ ।
(बिबिसी – हामीले रातोपाटिबाट)
Prevवैदेशिक रोजगारीको पीडा : महिना मरेपछि तलब छाडेर घर फर्कन बाध्य
Nextभक्तपुरमा स्कुटरको ठक्करबाट महिलाको मृत्यु
१३ महिने सियोना श्रेष्ठको लागि अहिले सम्म यती रकम उठ्यो बाबा मिडियामा ! (मार्मिक भिडियो हेर्नुहोस)
८४ वर्षीया इन्जिनियर मित्रलालले ६५ बर्षिया सुब्बा पद कि सरकारी जागिरे महिलासंग गरे बिवाह, पढ्नुहोस पुरा समाचार
८ दिनसम्म रोएर सके सम्झनाका आफन्तले आँशु, रुँदा रुदै गलेपछि १२ वर्षे सम्झनाको दाहसंस्कार, न्याय भन्ने चिज कता छ यो देशमा ?
कुलमानको ठाउँमा प्रधानमन्त्री ओलीका साला हितेन्द्रदेव !
बैतडीमा कलेज हिँडेकी किशोरीको शव जंगलमा यस्तो अवस्थामा भेटियो, कसरी भयो उनको मृत्यु? (127080)
यस्ता थिए लाहुरे र स्मिताका रमाइला टिकटक जुन यादमै सिमित रहेदेशै रुवायो हेर्नुस भिडियो (97397)
दुबई का’ण्ड भन्दै यी युवतिको हेर्नै नसकिने ३ मिनेट ४४ सेकेन्डको भिडियो सार्वजनिक( भिडियो हेर्नुहोस) (74735)
जति सुकै बिजिभए पनी केबल २ मिनेट समय दिएर अवस्य पढ्नुहोला ! (69516)
बल्ल प्रहरीले २४ घन्टामै भागरती ह#त्या,रा​ प’त्ता लगायो।गाउकै मान्छे रहेछ (64533)
हेर्नुस्, नेपाली सेनाको यस्तो क:’ठोर….. ; जुन भिडियो अहिले संसारभरी भाइरल भइरहेको छ (भिडियो हेर्नुस) (55497)
दुखको खबर !! अनिताको अप्रेशन सफल हुन सकेन अब के होला ? बिनोद रुदै मिडियामा आए (50395)
समाचार युवा नेता रामकुमारी झाक्री घा’इ’ते युवाहरु आ’क्रो’शित ( हेर्नुहोस् भिडियो ) (44056)
भर्खरै हेर्नुस भा’गीरथीको ह,त्यारा लाई यस्तो अवस्थामा प्रह’री द्वारा के गरियो, भिडियो सहित (43981)
खुसिको खबर – सोच्नै नसकिने गरि ह्वात्तै बढ्यो वृद्धभत्ता !!! (42340)
भर्खरै सरकारले निर्णय गर्दागर्दै भयो यति ठुलो लफ*डा, MCC पास अब नहुने, हेर्नुहोस् भिडियो हेर्नुहोस (MCC सहि कि गलत? )
यी हुन् कोरोना संक्रमणका ५ खतरनाक लक्षण, जुन देखिनासाथ अस्पताल गइहाल्नुपर्छः विज्ञ
एसएलसी फेल भएर दुबई गएका बिनोद , बुर्ज खालिफामा काम गरेर बने ‘ईञ्जिनियर’ !
कोरोना बढेपछि कडाइ, २५ भन्दा बढी भेला हुन रोक
आज बाट १४ जिल्लाका विद्यालय र बैङ्क पूर्ण रुपमा सिल हुने मन्त्रालय द्वारा आधिकारिक जानकारी